Guddiga Doorashada Dadban ee Federaalka oo soo saaray Jadwalkii ugu danbeeyay (Akhriso) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Yaa bixiyey Amarka Fahad Yaasiin looga celiyey Garoonka Muqdisho..? (Tirada dadka la socday & xog Cusub)
Yaa ka danbeeyay in Farmaajo diido Go’aankii ahaa inuu Jen. Bashiir Goobe hoggaamiyo Hay’adda NISA?
Farmaajo oo difaacay Fahad Yaasiin, kana hor yimid Shaqo ka joojintii uu ku sameeyay RW Rooble (Akhriso)
Akhriso: Qorshaha uu Fahad Yaasiin u degay Rooble iyo Sida uu Farmaajo u soo geliyay Kiiska Ikraan Tahliil
Kiiska Ikraan Tahliil: 5 Su’aal oo Jawaab uga baahan Madaxda Hay’adda NISA iyo Xalka kaliya..?
Xilliga la shaacinayo Go’aanka Maxkamadda Cadaallada Adduunka ee ICJ iyo Rajada Soomaaliya
Aqoonyahan taageera Farmaajo oo 10 Maalmood kadib lasii daayey, markii lagu qafaashay Nairobi
Golaha Amniga ka hadlay khilaafka joogtada ah ee Madaxda Soomaaliya (Warbixin uu siiyey James Swan)
Fahad Yaasin oo ka haray Diyaaradda Turkish Airlines ee maanta Muqdisho timid iyo Dib usoo laabashadiisa oo…
Diyaaradii Turkish Airlines ee laga celiyay Muqdisho oo Goor dhow ka degtay Garoonka Istanbul
Fal-celin weyn oo ka dhalatay Qoraalkii Farmaajo ee hakinta Awoodaha Rooble (Akhriso Jawaabo kulul…)
Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay Laba Nin oo magaca Alshabaab ku geysan jiray Afduub iyo Baad ay…
Faahfaahin: Aqoonyahan si weyn u taageersanaa Farmaajo oo lagu Afduubtay Nairobi
Maxay Ciidamada Mareykanka uga tageen Garoonka Diyaaradaha magaalada Kaabul..? (Arag yaabkan)
Dowladda Turkiga oo howlgelisay Diyaaradii Dagaal ugu Casrisaneyd oo Drone ah (Daawo Sawirrada)
Cudurka Covid-19 oo markii saddexaad kusoo laabtay Soomaaliya (Bandow taliyey in lagu soo rogo..)
Maxay ku heshiiyeen Rooble iyo Qoorqoor: Mar kale miyuu isbedelay Madaxweynaha Galmudug..?
RW Rooble oo ka daba tegay Habraacii ay soo saareen Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed, kuna daray..
Taageerayaasha Farmaajo oo Warqad Dalab Dhaqaale oo yaab leh ka sameeyay RW Rooble iyo Beenin..
Dowladaha Soomaliya iyo Kenya oo dib usoo celiyey xiriirkii Ganacsiga, Maalgashiga iyo Amniga (Akhriso)
Wasiir Xundubey oo kashifay Xogtii uu ka hayey RW Rooble. (Dhaqaalihii laga raadiyey Imaaraadka -Qormo-)
Jen. Muungaab: “Guddiga Farmaajo magacaabay waa Sharci darro iyo is-hortaag Caddaalad ee kiiska Ikraan”
Cudurkan Magacii, Mase la Kulantay?! Waxaana hal mar kala dhuunta wixii nacamleeye ahaa.. (Qormo)
Saddexda Qodob oo lagu eedeyn karo ayuu Qoorta surtay Farmaajo (Qormo Culus)
Guddiga Doorashada Dadban ee Federaalka oo soo saaray Jadwalkii ugu danbeeyay (Akhriso)
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federal ayaa shaaciyey Jadwalka Guud ee Doorashada Baarlamaanka Labada Aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Guddiga ayaa sheegay in si waafaqsan mas’uuliyadda Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federal (GDHF) kana saaran hirgelinta doorashooyin degdega, waqtigooda ku dhaca, xor iyo xalaal ah iyo baahida loo qabo in la bilaabaypo geeddi-socodka doorashooyinka iyada oo laga hor tegayo dib u dhac dambe.
GHDHF wuxuu shaaciyey jadwalka ugu dambeeya ee doorashooyinka iyadoo la raacayo shaxda doorashada 29 Juun, habraacyaddii 17 Sebtember iyo 27 May lagu heshiiyay oo ay si wada jir ah u wada saxiixeen dhammaan madaxda maamullada Dowlada federaalka Soomaaliya.
Jadwalka cusub meelaha qaarkood uga duwan kii ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran, iyadoo lagu qoray 7 Oktober 2021 la dhaarinayo Xildhibaanada labada Aqal, taasoo ka dhigan doorashada Madaxweynaha ay u dhici karto bilaha November ama Disember. Jadwalkii hore ee Golaha Wadatashiga Qaran ayaa dhigayay in 10-ka Oktoober la dooranayo Madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya.
HOOS KA AKHRISO
Previous articleXildhibaanad ka tirsan Baarlamaanka Federaalka oo sheegtay in Kiiska Ikraan Tahliil uu yahay ‘Afduub’
Next articleRW Rooble oo ka hadlay Jadwalka cusub ee kasoo baxay Guddiga Doorashada Federaalka
Wakiilada Beesha Caalamka oo la shiray Cali Guudlaawe iyo Cadaadis lagu saaray Kuraasta harsan inay…
XOG: RW Rooble oo ka badbaaday Laba Qodob oo halis geliyay hoggaankiisa Doorashada
Maxaa ka jira in Ikraan Tahliil ay u gacan gashay Alshabaab..? (Xog laga helay NISA & Jawaabta Hooyadeed)
XOG: Farmaajo oo diidmo kala hor tegay Dalab uga yimid Axmed Qoorqoor (Maxaa dhex maray..?)
Xildhibaan kashifay inuu Farmaajo ka danbeeyay Gadoodkii Ciidamada ee magaalada Beledweyne